Ahoana no Daty Zazavavy kely miaraka amin'ny Ankizy
Ahoana no Daty Zazavavy kely miaraka amin’ny Ankizy
Rehefa vehivavy tanora iray mipetraka ao amin’ny trano fisotroana kafe iray kaopy kafe, dihy tao amin’ny club-na dia eo anivon ny mpiara-mianatra, na inona na inona mampiavaka azy amin’ny manan-janaka mpifaninana. Tsy ho fantatrao fa ianao dia manomboka miaraka ny zazavavy miaraka amin’ny ankizy. Izy no manapa-kevitra fotsiny mba hamela ny tenany ny ambiny roa ora. Na izany aza, ny sary maimaim-poana ny vehivavy izy amin’izao fotoana izao manana, dia mamitaka. Raha toa ka milaza ny ankizy ao amin’ny resaka, ny lehilahy iray izay efa nampiseho mahaliana ao aminy, ny fanovana eo anoloan’ny azy: dia lasa mikorotan-tsaina na panics. Ny sasany amin’izy ireo, hoy izy ireo, avy hatrany dia nandositra, raha ny hafa kosa mbola mijejojejo fa romboty ary ny fifandraisana amin’ny maha-ela maha-fahazavana raharaha manomboka ny hiverina ho amin’ny fifandraisana matotra.
Dia izany ny fitsarana an-tendrony? Moa izany ny tahotry ny andraikitra? Na angamba ny antony nahatonga ny fisarahana dia ao an-be ny zavatra avo lenta andrandrainy. Matetika ny olona ravina ny vehivavy iray miaraka amin’ny ankizy satria izy no matahotra, ary izy dia tsy afaka na tsy t te-miaiky fa na dia ny tenany. Izany no mitranga, toy ny fitsipika, ny amin ireo izay tsy t manana ny zanany: matahotra ny andraikitra mikasika izay tsy mahalala na inona na inona mihitsy. Izy ireo no matahotra fa izy ireo no tsy omena ny fahafahana manokana, satria ny zaza ary izy ireo dia tsy ho afaka hametraka fifandraisana amin’ny kely ny olona. Lehilahy iray no nanahiran-tsaina ny fanontaniana, Aho handeha aho mba ho mpiara-miasa mampiaraka ny vehivavy iray amin’ny ankizy iray, dia Inona no anjara asany dia voatendry ho ahy raha ny fifandraisana mitohy. Toy ny tahotra, ny ahiahin’izy ireo, ary fanontaniana mipoitra tsy misy antony. No daty ny vehivavy iray miaraka amin’ny zanany? Eny tokoa, ny mpiara-miasa mety manana fotoana sarotra, satria izy miatrika ny fifandraisana mafy eo ny reny sy ny zaza. Izy dia tsy maintsy, raha tsy misy ratsy mahakasika ity union, hanana fifandraisana manokana amin’ny vehivavy ary, mandritra izany fotoana izany, miezaka hanatratra ny famindram-po ny azy ny ankizy amin ny teny hafa, manao araka ny tokony ho izy ny fifandraisana eo amin’ny roa tonta. Liana amin’ny vehivavy mitaiza ny zaza tsy miankina mametraka ny olana maro tsy misy ny famahana ny olana izay sarotra ny hanorina misy fifandraisana. Inona no tokony ho lehilahy ve izy raha tena tia fa tsy tokana ny zazavavy fa ny zazavavy miaraka amin’ny ankizy. No daty zazavavy kely miaraka amin’ny ankizy? Ny fo babo tamin ny hatsaran-tarehy, ary avy eo ianao mahita fa manaraka azy dia misy ankizy kely. Inona no tokony hataonao? Tokony hanomboka ny fifandraisana amin’ny zazavavy iray izay manana zaza, na hanome ny zava-tsarotra, mifandray amin’ny ny endrika. Rehefa dinihina tokoa, misy maro ny ankizivavy izay tsy vesaran’ny toy izany andraikitra. Ianao no tsy menatra ihany ny tena manokana unpreparedness ho amin’ny andraikitra mifandray amin’ny efa misy mini-fianakaviana, fa koa noho ny zava-misy fa ny tsy nampoizina niseho, angamba, dia tsy tsara. Ankoatra izany, ny namana sy ny havana hahakivy anao amin’ny fotoana rehetra. Mandritra izany fotoana izany, dia efa lavo-pitia taminy, ary don t te-hiala mora foana izany. Ny olona izay tsy t toy ny ankizy be dia be, aza t mila famakafakana ny mahatsara sy maharatsy ny mifampiresaka, mampiaraka zazavavy kely miaraka amin’ny ankizy. Ny olona toy izany aza t foana ho tia ny zanany, dia tsy afaka ny hanaiky, fondle ary hanangana azy ireo, ka nandray ny ankizy dia tsy nila mihitsy. Na izany aza, tompon’andraikitra iray dia tsy ho very hevitra be noho ny zava-misy fa izy tia ankizivavy iray amin’ny ankizy iray, fa amin’ny fomba hitondra tena aminy sy ny ankizy. Tokan-tena pianakaviana mpikarakara tokatrano dia vady amin’ny fahalalana manokana sy ny fepetra. No daty zazavavy kely miaraka amin’ny ankizy? Araka psychoanalysts (dia maneho ny heviny ny mpitazana tsy mitongilana), ny ankamaroan ny tokan-tena pianakaviana mpikarakara tokatrano dia mampiavaka ny mifanohitra napetraka ny fahaiza-manao ary ireo hetahetany, ny ampahany lehibe izay azo soa aman-tsara koa ny lisitry ny azo lavina fahamendrehana. Rehefa mahita mahagaga ny ankizivavy, dia tsy fantatro raha ianao handeha daty zazavavy kely miaraka amin’ny ankizy na fotsiny sexy woman. Na izany aza, dia tokony hanao ezaka mba hisarihana ny saina. Ny vehivavy miaraka amin’ny ankizy dia tsy ny reny ihany koa fa ny tovovavy izay manonofy momba ny fitiavana madion. Azo antoka, izy dia tsy hilaza aminao daholo ny zava-miafina hatrany am-boalohany, ary izy dia zara raha hilaza aminareo momba ny ankizy voalohany, tsy tokony handresy ny fony. Izy te-hahafantatra fa ianao no tena niahy azy ary fa ny tena azo antoka sy matotra mba hitsena ny zaza. Raha ny hevitrao momba ny fiarahana amin’ny olona iray miaraka amin’ny ankizy ianao, dia tokony ho vonona mizara ny andraikitra.
Ahoana no daty ny vehivavy miaraka amin’ny ankizy
Voalohany indrindra, tokony takatsika fa ny vehivavy no asa lehibe mitaiza ny zanany ny tenany. Mety hieritreritra ianao fa izy no mizaka tena sy ny lava volo, fa tsy afaka mamaky ny eritreriny, ary tsy t fantatrao momba ny be sy ny maro ny olana isan-karazany, fa izy miatrika isan’andro. Dia mila ny fanohanana sy ny fotoana ho an’ny tenany. Raha toa ka mampiaraka ny zazavavy miaraka amin’ny ankizy ary ianareo tia azy, hanam-paharetana, ary ho hitanao ny teny zazavavy ao ambadiky ny saron-tava ny vy vehivavy. Ahoana no daty zazavavy kely miaraka amin’ny ankizy. Toy ny vehivavy hafa, iray neny te-handositra ny fiainana andavanandro sy ny lasa fotsiny ny vehivavy tsara tarehy izay raisina toy ny andriambavy. Izy dia manao ezaka mba mijery tsara tarehy sy tsara, na izany aza, dia afaka hanafoana mihitsy aza ny daty manan-danja indrindra. Indraindray ny fiainana dia tsy mialoha, indrindra, raha manana ankizy izay mety ho latsaka marary na mahazo azom-pahoriana. Raha toa ianao ka handeha hanomboka ny fiarahana amin’ny olona iray amin’ny ankizy iray, haka ny zavatra rehetra mora sy ho fahazavan-tsaina. Ianao dia tokony hahatsiaro mandrakariva fa ny vehivavy no niandry azy amin’ny ankizy ao an-trano, noho izany, matetika, dia tsy afaka manam-bola na inona na inona fanapahan-kevitra tsy ampoizina. Raha toa ianao ka liana amin’ny iray amin’ny ankizy mampiaraka, tokony ho fantatrao fa miezaka foana izy hitandrina ny zavatra rehetra eo ambany hita maso na ny tsy hita maso fanaraha-maso. Toy ny Lohalika, dia tsy maintsy miverina an-trano amin’ny alalan’ny ny fotoana ary tsy misy fialan-tsiny azo ekena. Ny ankizy rehetra dia mila reny ny saina ianao, dia tokony tsarovy fotsiny fa fanambarana. Tadidio fa tia namihina sy nanoroka manoloana ny ankizy dia tsy hevitra tsara indrindra. Ny ankizy no tena impressionable amin’ny sokajin-taona rehetra, noho izany raha toa izy ireo dia ho tia anao sy ny fifandraisana amin’ny neny dia t haharitra ela, izy ireo dia afaka mahatsapa ny adin-tsaina sy ho tafintohina. Tsara rehetra neny mihevitra ny zanany ho ny lehibe indrindra, ary ny tena manan-danja ny laharam-pahamehana eo amin’ny fiainany, dia mila fotsiny mba hanaiky ny tena zava-misy io ary aza t na dia miezaka hifaninana amin’ny zanak’osy, dia t toa hafahafa. Iray amin’ireo ratsy kokoa ny zavatra afaka atao dia ny manome azy torohevitra na hampianatra azy ny fomba fanabeazana ny zanany, indrindra fa raha tsy t hanana ny azy manokana. Tokony ho, na ny dokoteran-jaza na malaza mpampianatra zaza madinika mba hilaza aminy ny momba ny tombontsoa sasany zava-baovao ny fomba fitaizana ny ankizy. Raha te hitaiza ny ankizy, dia tokony ho azo antoka ny ampahan ny fianakaviana. Raha toa ka hita taratra amin’ny fomba daty zazavavy kely miaraka amin’ny ankizy, ho vonona fa indraindray ianao dia mandehana eo amin’ny daty roa satria izy dia tsy manana na iza na iza kevitra ny handao azy. Toy ny vehivavy hafa, izy dia tia mandany ny daty amin’ny fomba manokana, na izany aza, dia tokony tafiditra ao ny ankizy. Manaiky fotsiny izay sy mitandrina ny fihetseham-po mahafinaritra tamin’izay fotoana izay ny tenanao. Aza raha tsy t toy izany hevitra mihitsy, tokony tsy mandrara azy sy manaiky fotsiny fa rehefa ny hafa ny hamaivanina ireo. Ny olona sasany handrava tsy afa-miaraka amin’ny vadiny ihany fa koa miaraka amin’ny ankizy fotsiny mandao ny fianakaviana, sy ny ny ankizy tsy mahalala ny rainy izay dia azo antoka fa tsara ho vaovao ny olona. Na izany aza, maro ny olona mbola mifandray amin’ny ny ankizy sy ny ex-vady ihany koa. Tokony ho tsaroantsika fa izy ireo no manao izany afa-tsy ho an’ny ankizy sy ny soa, ka aza t ho saro-piaro. Isaky ny reny tokan-tena dia t hilalao lalao isan-karazany ary tsy t te-hijery ny zava-miafina. Fantany ny zavatra tiany ho azo antoka fa raha ny faniriana mitovy, ianao dia endrika mahafinaritra sy mahery union. Afaka manantena ny hahazo afa-tsy ny amin-kitsimpo ny toe-tsaina manoloana ny aminareo ihany koa ny maha-izy manantena ny marina avy ny lafiny. Maro ireo tokan-tena pianakaviana mpikarakara tokatrano efa nanana traikefa tsy mahafinaritra tany aloha, dia nanao tsoa-kevitra ary vonona hiatrika ny fifandraisana vaovao. Afaka mahazo ny mahagaga valisoa raha toa ianao ka manao ny marina miaraka aminy na inona na inona mitranga. Zazavavy kely miaraka amin’ny ankizy dia ho lasa ny tsy mivadika mpiara-miasa sy namana tsara indrindra raha mampiseho fahendrena sy ny faharetana. Afaka minamana amin’ny zanany sy ny ho tena namana sy ny fianakaviana sambatra amin’ny hoavy
← Ny firaisana ara-nofo amin'ny Chat tsy mitonona anarana. Maimaim-poana sy tsy misy fisoratana anarana
Italiana ankizivavy dia mora loatra. Ny Florentine →